eSIM: Wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ka ogaato waxa ku saabsan | War gadget
Nacho Cuesta | | Telefoon
Kaarka SIM-ka, sidaan ognahay illaa iyo hadda, wuxuu hawl aasaasi ah ka ciyaaray moobilladayada. Iyo, mahadsaniddeeda, waxaa naloo aqoonsaday inaan nahay isticmaaleyaasha shirkad gaar ah waxaana naloo ogol yahay inaan marino shabakadeeda daboolida. Markii sanaduhu socdaan Kaararka SIM-ka ayaa sii yaraanaya cabir ahaan, iyada oo loo marayo mini, micro iyo nano SIMs, illaa iyo hadda, in eSIM uu yimaado si uu u beddelo suuqa taleefanka oo uu u qabsado meel yar oo qalabka ah.
Marka xigta waxaan kuu sheegaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato: waxa ay tahay, waxa loogu talagalay iyo waxa hawlwadeenadu bixiyaan.
1 Waa maxay eSIM
2 Maxaa loogu talagalay eSIM?
3 Wadayaasha leh eSIM
3.1 eSIM Liin dhanaan
Waa maxay eSIM
Waxaa laga yaabaa inaad bilowday inaad wax ka maqasho eSIM-ka cusub ama SIM-ka dalwaddii bilihii la soo dhaafay maaddaama kaarkan cusub ee dalwaddu uu isbeddel ku sameynayo suuqa taleefanka.
ESIM waxaa loo tixgeliyaa isbeddelka kaarka SIM-ka ee aan wada ognahay. Waa kaar SIM ah in la helo ku dhex jira taleefannada casriga ah laftooda iyo in, mustaqbalka, sidoo kale lagu dari doono kombuyuutarrada gacanta, saacadaha casriga ah, kiniiniyada, iyo qalab kasta oo ku xirmi kara shabakadda taleefanka gacanta.
Waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah in eSIM lagu dhex dari doono aaladda iyo inay ku mashquulsan tahay wax ka yar nanoSIM oo aan hadda naqaanno, soo-saarayaashu waxay yeelan doonaan wax yar oo dheeri ah oo ku dhex jira alaabtooda, in kasta oo aysan noqon doonin mid xad-dhaaf ah.
Maxaa loogu talagalay eSIM?
Mid ka mid ah kuwa ugu weyn Faa'iidooyinka uu bixiyo kaarkaan casriga ah ee cusub, ayaa ah in hadda isticmaaleyaashu ay si weyn u yareyn doonaan waqtiga ay ku qaataan isku dayga shirkadda beddelka, maadaama aysan daruuri noqon doonin in la sugo in la helo SIM-ga cusub ee shirkadda aan u sameynay wareejinta.
Faa'iidada kale ee ay bixiso ayaa ah inay sidoo kale noqon doonto fudud tahay in la beddelo sicirka shirkadaada hada. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad u safarto dibadda, waxaad ka kireyn kartaa sicirka meesha aad aadi karto si fudud. ESIM waxaad kuheli doontaa sicirkaaga qandaraaska qalab kasta oo aad haysato adigoo si fudud ugu shaqeynaya adeega mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Kuwaas oo dhan faa'iidooyinka ma aha oo kaliya loogu talagalay isticmaalaha, taas oo sida muuqata nolosha u fududeyneysa, laakiin sidoo kale waqti iyo lacag u badbaadineysa hawl wadeennada, kuwaas oo xoogga saari kara hagaajinta adeegyada kale.
Wadayaasha leh eSIM
Dhammaan hawlwadeenada ugu waaweyn ee aan ka ogaanno Spain, kaliya Vodafone iyo Orange ayaa ah kuwa leh adeeggooda eSIM u gaarka ah. Wax walba waxay muujinayaan in MoSistar's eSIM uusan qaadan doonin waqti dheer in lagu daro wax soo saarkeeda wax soo saar muddo gaaban gudahood.
eSIM Liin dhanaan
Orange Waxay ahayd hawl wadeenkii ugu horreeyay ee eSIM ka billaaba Spain, laakiin, waqtigaas, waxaa jiray kaliya hal qalab oo la jaan qaadi kara: kan Huawei Watch 2 4G. Thanks to eSIM, isticmaale Orange wuxuu xiriirin karaa nambarkiisa taleefanka sidaas darteedna qiimaha qandaraaska ee saacadan casriga ah.
Maaddaama shirkadda lafteeda ay ku dhawaaqday, waxay ka shaqeynayaan inay bixiyaan adeeggan kaarka casriga ah sidoo kale moodooyinka cusub ee iPhone: iPhone XS, iPhone XS Max, iyo iPhone XR. Waxaas oo dhan iyada oo ujeedadu tahay kaliya in nolosha loo fududeeyo macaamiisheeda isla markaana la siiyo tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay.
Hadaad rabto inaad hesho Orange eSIM, marka hore waa inaad dhaqaajiso adeegga MultiSIM taas oo qiimaheedu yahay 4 euro bishii. Marka adeeggan la hawlgaliyo, eSIM kasta oo aad rabto inaad codsato, waa inaad bixisaa 5 euro.
Wax walba oo ka yimid Vodafone waxay soo saartaa saameyn weyn, kiiskanna, adeegeeda eSIM ee loogu yeero OneNumber ma noqon doonin inuu ka duwanaado. Vodafone eSIM ayaa lagu dhawaaqay goor dhow, wax yar uun ka dib markii la soo saaray moodooyinka cusub ee iPhone-ka oo ay ku jiraan eSIM.
Sida kiiska Oranjiga, Vodafone eSIM waxay leedahay kharash halkii arrin ah:
Wixii kuwa Macaamiisha Vodafone ee leh heerka L, XL, One L ama One XL, adeegani wuxuu noqon doonaa mid bilaash ah aaladda ugu horeysa wuxuuna ku bixin doonaa 5 yuuro saldhiga labaad ee ay ku jirto.
Macaamiisha leh sicirka kale ee Vodafone qandaraaska, kharashka hawlgelinta wuxuu noqon doonaa 5 euro qalabka koowaad iyo kan labaad.
Wixii ah macaamiisha cusub ee OneNumber, eSIM wuxuu yeelan doonaa kharash 5 euro ah oo loogu talagalay hawlgelinta hal ama laba qalab.
In kasta oo ay ku dhawaaqeen in xilligan aysan jirin wax war ah oo ku saabsan eSIM waxaa qoray Movistar waxay ka walwalsan tahay, waxa ugu aaminka badan ayaa ah in hawlwadeenka buluuga ah uu dhaqso u bilaabi doono kaarkiisa dalwaddii si uu ugu biiro tartamayaasha Vodafone iyo Orange
Waxaan u maleyneynaa markaa in hawlwadeenka buluuga ah uu u soo bandhigi doono adeegsadayaasha eSIM cusub sida ugu dhakhsaha badan. Ujeedada ugu weyn ee Movistar waa had iyo jeer in la siiyo alaabada ugu fiican macaamiisheeda isla markaana loo fududeeyo noloshooda, sida wax soo saarkooda calanka, Aura Movistar.
Aura waa kalkaaliye macmal ah oo wax ka barta adeegsadayaasha iyadoo loo marayo macluumaadka la bixiyo maalin kasta. Tikniyoolajiyaddan, waxaad ku weydiin kartaa Aura wixii macluumaad ah ee ku saabsan koontadaada Movistar iyada oo loo marayo barnaamijka shirkadda iyo sidoo kale inaad u dirto amarro telefishanka Movistar Plus.
Markii aan aragnay taas Movistar waxa ugu horreeya waa macaamiisheeda iyo qanacsanaantooda, waxaan hubnaa in eSIM u gaar ah uusan waqti dheer imaan doonin.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » eSIM: Wax kastoo aad u baahan tahay inaad ka ogaato